यौन सन्तुष्ट हुँदा स्वास्थ्यम्मा हुने फाइदाहरु ! – Public Health Concern(PHC)
यौनक्रियाका दौरानमा सबैले पुर्ण सन्तुष्टि प्राप्त गर्छन् नै भन्ने छैन । कतिपय मानिस यौनजीवनबाट दुखी पनि देखिन्छन् । यौन सन्तुष्टि मज्जाले प्राप्त हुनुलाई चरमोत्कर्ष भनिन्छ । चरमोत्कर्षमा पुग्दा स्वास्थ्यमा धेरै असर देखिने अध्ययनले देखाएका छन् । केही अनुसन्धानहरुले चरमोत्कर्षका विभिन्न फाइदाहरु पत्ता लगाएका छन् ।
के के हुन्छ त फाइदा ? जानीराखौं :
चरमोत्कर्षले मुटुलाई मात्र हैन, मस्तिष्कलाई समेत स्वस्थ राख्न सहयोग गर्छ । विशेषज्ञहरुका अनुसार, चरमोत्कर्षको बेलामा बढ्ने रक्तप्रवाहका कारण मस्तिष्कले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन प्राप्त गर्ने गर्छन् । एक अध्ययनको सिलसिलामा एमआरआइ गरेर हेर्दा सामान्य अवस्थामा भन्दा चरमोत्कर्षको बेलामा महिलाको मस्तिष्कले बढी मात्रामा अक्सिजन उपयोग गर्ने गरेको पाइयो ।द नेपालटप
Tags: better to know in healthhealth infomine health: mine concernsexual health